गुगल फोटोहरू? यसलाई प्रयोग गर्नु अघि दुई पटक सोच्नुहोस् आईफोन समाचार
गुगल फोटोहरू? तपाईले यसलाई प्रयोग गर्नु अघि दुई पटक सोच्नुहोस्
यो निराश Google I / O को भावना हो। गुगल फोटोहरू एप्पल र यसको आई-क्लाउड फोटो लाइब्रेरीको लागि अनुमति दिएर धमाका छन् गुगल क्लाउडमा सबै फोटोहरू भण्डार गर्नुहोस् कुनै ठाउँको सीमा बिना र पूर्ण नि: शुल्क। हो, तपाईले सहि पढ्नुभयो, गुगलले तपाईको पूरै फोटोग्राफिक लाइब्रेरी खाली ठाउँ बिना नै अपलोड गर्न अनुमति दिनेछ, धेरै गिगहरू तपाईले चाहानुहुन्छ र एकल यूरो तिर्नु बिना नै। यसमा सानो प्रिन्ट छ, किनकि यो तपाईंको फोटोको गुणस्तरमा निर्भर गर्दछ र यदि तपाईं तिनीहरूलाई संकुचन गर्न चाहनुहुन्छ वा मूल संस्करणहरू राख्न चाहानुहुन्छ भने, तर सानो प्रिन्टले प्रयोगकर्ताहरूलाई वास्तवमै चिन्ता लिनुपर्दछ कि गुगलले के गर्न सक्दछ भन्ने कुरा छ। ती फोटाहरू जुन तपाईं यसको क्लाउडमा जानुहुन्छ। गुगल फोटोहरूमा तपाईंको फोटो लाइब्रेरी अपलोड गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ? हामी तपाईंलाई के भन्न लागिरहेको छ पहिले राम्रो भन्दा पहिले हेर्नुहोस्।
अपलोड गरेर, भण्डारण गरेर वा सामग्रीहरू यसमा वा हाम्रो सेवाहरू सबमिट गरेर, तपाईं गुगल (र यसको पार्टनरहरू) लाई प्रयोग गर्ने, होस्ट गर्ने, भण्डार गर्ने, पुन: उत्पादन गर्ने, परिमार्जन गर्ने, व्युत्पन्न कार्यहरू सिर्जना गर्न विश्वव्यापी इजाजतपत्र प्रदान गर्नुहुन्छ (उदाहरणका लागि, ती ती हुन् जुन अनुवाद, अनुकूलन वा अन्य परिवर्तन जुन हामीले बनायौं ताकि तपाईंको सामग्री हाम्रो सेवाहरूमा राम्रोसँग अनुकूलित हुनेछ), सञ्चार, प्रकाशित, प्रदर्शन वा सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शन र वितरण सामग्री भने।
यो इजाजतपत्र प्रभावमा रहनेछ जब तपाईं हाम्रो सेवाहरू प्रयोग गर्न रोक्नुहुन्छ।
यो पाठ शाब्दिक रूपमा लिइएको छ (प्रतिलिपि र टाँस्नुहोस्) गुगल सेवा सर्तहरू जुन तपाईं पढ्न सक्नुहुन्छ यो लिङ्क, सेक्सन भित्र "हाम्रो सेवाहरूमा तपाईंको सामग्री"। वास्तवमा, गुगलले यसको सेवाहरूमा अपलोड गरेको सामग्री प्रयोग गर्न अधिकार राख्छ जुन यसको लागि चाहानुहुन्छ।, संसारमा जहाँसुकै, परिमार्जन सहित, व्युत्पन्न कार्यहरू सिर्जना गर्ने वा तिनीहरूलाई सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शन सहित।
के सबै समान सेवाहरूको लागि समान हो? के एप्पलले आईक्लाउडसँग समान कार्य गर्दछ? उत्तर होईन, तपाईं iCloud सेवा सर्तहरूमा देख्न सक्नुहुनेछ, जुन तपाईं भित्र देख्न सक्नुहुनेछ यो लिङ्क र जहाँबाट मैले शाब्दिक रूपमा यी दुई अनुच्छेदहरू निकाल्छु:
यसको मतलब यो हो कि तपाईं, र एप्पल होईन, तपाईं अपलोड, डाउनलोड, पोष्ट, ईमेल, प्रसारण, भण्डार, वा अन्यथा सेवा को उपयोग को माध्यम बाट उपलब्ध बनाउनु भएको सामग्रीको लागि पूर्ण जिम्मेवार हुनुहुन्छ।
एप्पलले सामग्री र / वा सामग्री पेश गर्छ वा सेवा मार्फत उपलब्ध बनाउँछ सामग्रीको स्वामित्व दावी गर्दैन। जहाँसम्म, यदि तपाईं सार्वजनिक वा अन्य प्रयोगकर्ताहरूसँग पहुँच हुने सेवाको क्षेत्रहरूमा यस्ता सामग्री सबमिट वा पोष्ट गर्नुहुन्छ जसमा तपाईं त्यस्ता सामग्री साझा गर्न सहमत हुनुहुन्छ, तपाईं एप्पललाई एक गैर-विशेष, रोयल्टी-रहित, विश्वव्यापी प्रयोग लाइसेन्स, वितरण, सेवाको माध्यमबाट यस्तो सामग्री पुन: उत्पादन, परिमार्जन, अनुकूलन, प्रकाशित, अनुवाद, सार्वजनिक संचार, र सार्वजनिक प्रदर्शन गर्दछ उद्देश्यका लागि सामग्री पोष्ट गरिएको थियो वा उपलब्ध गरिएको थियो, एप्पल पारिश्रमिक वा दायित्व बिना।
त्यो हो, जबसम्म हामी स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक फोटोहरू (वा कुनै अन्य सामग्री) सार्वजनिक गर्दैनौं जुन हामी अपलोड गर्छौं, एप्पल तिनीहरू संग केहि गर्न सक्षम हुँदैन। घटनामा जब हामी तिनीहरूलाई सार्वजनिक गर्छौं, तब यसले दावी गर्दछ कि विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग लाइसेन्स, जस्तै गुगल। के तपाईं अझै गुगल फोटोमा आफ्नो फोटोहरू अपलोड गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ? यस समयमा म एप्पललाई ट्याब सार्नको लागि कुर्दै छु।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » एप्पल उत्पादनहरू » iCloud » गुगल फोटोहरू? तपाईले यसलाई प्रयोग गर्नु अघि दुई पटक सोच्नुहोस्
मानुएल लोने परेरा भन्यो
हामी सबैलाई थाहा छ कि गुगलले हामीलाई दिनको २ hours घण्टा नियन्त्रण गर्न चाहन्छ, तर मलाई लाग्छ कि यो "प्रतिलिपि गरेर टाँस्नुहोस्" सर्तहरूको तपाईले सुरुदेखि नै गर्नुहुन्थ्यो, र त्यस अंशलाई वेवास्ता गर्नुहुन्न:
Our हाम्रा केहि सेवाहरूले तपाईंलाई सामग्री अपलोड, पठाउन, भण्डार गर्न वा प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ। यदि तपाइँ गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ त्यो सामग्रीमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारहरूको मालिक हुन जारी राख्नुहुनेछ। छोटकरीमा, तपाईको हो तपाईको हो »
मँ बुझ्छु कि यस लेखको साथ तपाईले के चेतावनी दिन चाहानुहुन्छ, तर यसलाई स्पष्ट र भ्रामक बिना नै गर्नुहोस्
म्यानुएल लोने परेरालाई जवाफ दिनुहोस्
डेभिड (@ डेविड २FS एफएस) भन्यो
अन्तिम परिमार्जित: अप्रिल १,, २०१।
तपाईंले लि put्कमा राख्नुहुन्छ कि: http://www.google.com/intl/es/policies/terms/
त्यो हो, तिनीहरू यसलाई १ बर्षदेखि गर्दै छन्। अब जब Google फोटोहरू आईओएसमा खराब छ, तर यो सबै समयमा फरक पर्दैन?
अर्को तर्फ, तिनीहरू Google को "सामान्य" सर्तहरू हुन्, Google फोटोहरूमा निर्दिष्ट छैन। र समाप्त गर्न, के तपाईंले «फ्लिकर», वा अन्य समान सेवाहरूको सर्तहरू देख्नुभयो?
जे भए पनि, म यसमा समाचार देख्दिन, केवल जनतालाई अलार्म गर्ने प्रयास। शुभकामना।
डेभिडलाई जवाफ दिनुहोस् (@ डेविड २FS एफएस)
तिनीहरू सबै गुगल सेवाहरूको सर्त हुन्। तिनीहरू Google तस्विरको अन्त्यका साथ परिमार्जन गरिएको छैन भन्ने हो कि तिनीहरू समान सर्तहरू रहिरहन्छन्।
मैले अन्य सेवाहरूको सर्तहरू हेरेको छु कि भनेर, उत्तर हो हो। लेखमा मैले ती क्लाउडलाई राखें जुन एप्पलको बारेमा पृष्ठमा मेरो रुचि हो, तर तपाईले फ्लिकरको सर्तहरूको बारेमा सोध्दा ती एप्पलको जस्तै छन्।
र तपाईको बारेमा के भन्नेको बारेमा "अब जब Google फोटोहरू आईओएसमा बाहिर आउँदछन्, के यो खराब छ, तर यो सबै समयमा यसले केही फरक पार्दैन?" स्पष्ट रूपमा, यदि यो आईओएस प्रयोगकर्ताहरूको लागि अवस्थित छैन, हामी यो ब्लगमा रुचि राख्दैनौं, याद गर्नुहोस्, हामी "आईप्याड समाचार" हौं।
म कसैलाई सचेत गराउन कोशिस गर्दिन, म मात्र तिनीहरू सर्तहरू र सबैलाई त्यस्तै कार्य गर्न सचेत गराउने प्रयास गर्छु। तपाईं आफ्नो फोटोको साथ तपाईं के गर्न चाहनुहुन्छ, र म यो मेरो मार्फत पनि गर्नेछु।
मलाई विश्वास छ कि एप्पलले यसको बारेमा केहि गर्न गइरहेको छैन, गुगलले पसिना के गर्छ, यदि तपाईं यसो भन्नुहुन्छ किनकि कम मूल्य र अरूको कारणले, यो यससँग समात्नेछ र त्यो एप्पलसँग जान सक्दैन।
मलाई आशा छ यो केहि गर्छ ब्याकअप गर्न १२ जीबी उपकरणहरूसँग GB जीबी भएको, फोटोहरू र भण्डार फाईलहरू अपलोड गर्नु हास्यास्पद छ। कम से कम नि: शुल्क क्षमता विस्तार, वा पनि तपाईं खरीद उपकरणमा निर्भर नि: शुल्क बोनस प्रस्ताव।
तपाईं एक chayotero अलार्मवादक fanboy हो। यसले तपाइँलाई चोट पुर्‍यायो कि Google ले कार्यहरू राम्रोसँग गरेको छ र तपाइँको एप्पल जहिले पनि औसत छ। तपाईं लाई दोष दिनुहोस्
धेरै राम्रो ग्रेड। प्रत्येकले आफूले चाहेको कुरा गर्छ, तर नोटका लेखकले हामीलाई आफ्नो राय दिन्छ र हामीलाई सोच्न पनि बाध्य पार्छ, यो सोच्न अनिवार्य छैन, तर यो नोटले मलाई के गर्ने निर्णय गर्न मद्दत गर्दछ, सायद तपाईले एउटा सानो पढ्नुहुन्छ होला प्रिन्ट, बीमा को जस्तै। के म सहमत गर्दछु कि एप्पलले नि: शुल्क आफ्नो क्षमता योजना बढाउनु पर्ने थियो, यसले टर्मिनल र सहयोगी उपकरणहरुमा यसको कमाई पहिले नै गरिसकेको छ। अभिवादन
जब सम्म म कसैलाई तिनीहरूको आँखा खोलिदिन, र गुगलले जहिले प्रदान गर्दछ सम्पूर्ण प्रकारको मुश्किल सेवाहरूको सावधानीपूर्वक नहेर्नेसम्म।
म मेरो फोटोहरू, वा मेरो कुनै पनि डाटालाई विश्वास गर्दिन, मेरो सम्पर्कहरू वा डाटा बेच्न समर्पित कसैलाई ईमेल।
यसको खंडहरू यति भन्छ, तर कोही पनि तिनीहरूका आँखा खोल्न सक्दैन। राम्रो काम, लुइस!
श्रापित सन्देश बग कसरी ठीक गर्ने
के गर्ने यदि iTunes ले तपाईंको आईफोन पहिचान गर्दैन